दिक्क लागेको मानसिक स्थितिमा हुनुहुन्छ ? सहयोगी टिप्स - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips दिक्क लागेको मानसिक स्थितिमा हुनुहुन्छ ? सहयोगी टिप्स
दिक्क लागेको मानसिक स्थितिमा हुनुहुन्छ ? सहयोगी टिप्स
तपाईंले पढ्नकै लागि मात्र पढिरहनुभएको हो ? काम गर्नकै लागि मात्र काम गर्नुभएको हो ? आफूले पढिरहेको या काम गरिरहेको कुरासंग आफ्नो उद्देश्य र रुची मेल खाएन भने जिन्दगी देखि नै दिक्क लाग्न थाल्छ । आफ्नो दैनिक रुटिन देखि नै दिक्क लाग्छ । त्यसैले आफूले किन त्यो काम गरिरहेको छु भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुहोस् ।
दिक्दारीलाई हटाउने एउटा मूख्य कुरा रमाउन सिक्नु हो । जन्मदिन, कुनै विशेष दिन या पर्वहरु आउँछन् । ती दिनहरुमा आफ्नो नियमित कामलाई ब्रेक गरेर रमाउनुहोस् । यसले मनमा खुशी मिल्छ, शरीरमा उत्साह आउँछ र दिमाग ताजा बन्छ ।
केही गर्न नै मन लाएको छैन भने कामबाट केही छिन ब्रेक लिनुहोस् । मज्जाले सुत्नुहोस् । यसले गर्दा मानसिक तथा शारीरिक थकान कम हुन्छ र नयाँ ऊर्जा आउँछ । त्यसपछि आफ्नो नियमित काममा केही फरक ल्याउनुहोस् । काममा आफ्नो लागि पनि समय निकालेर समय तालिका बनाउनुहोस् । एकोहोरो काम गर्ने बानी छोड्नुहोस् ।
कहिलेकाहीं काममा नयाँपनको कमी तथा आफूमा उत्प्रेरणाको कमीले पनि दिक्क लाग्छ । आफ्नो कामको क्षेत्रमा नयाँ के भइरहेको छ भन्ने बुझ्नुहोस् । आफ्ना योजनाहरु बनाउनुहोस् । आफ्नो कामको क्षेत्रका मानिसहरुलाई भेटेर कुराकानी गर्नुहोस् । सभा सेमिनारहरुमा सहभागी हुनुहोस् । काम गर्ने या पढ्ने नयाँ तरिका खोज्नुहोस् । यसले गर्दा नयाँ जोश जाँगर आउँछ ।
नयाँ साथी बनाउनुहोस् । नयाँ ठाउँमा भ्रमणको लागि जानुहोस् । लामो समयसम्म एक्लै बस्दा या आफ्नो मनका कुरा, विचार व्यक्त गर्न नपाउँदा पनि दिक्दारीले सताउँछ । त्यसैले समय निकालेर बाहिर निस्कने, साथीहरुसंग समय बिताउने, आफ्ना भावना र विचारलाई डायरीमा टिपोट गर्ने गर्नुहोस् । परिवारका सदस्यसंग समय बिताउनुहोस् । आफूलाई मनपर्ने खाना खानुहोस् । योगा या मेडिटेसन गर्नुहोस् । सामाजिक काममा सहभागी हुनुहोस् । यसले गर्दा दिमागमा सकारात्मक सोंचहरु आउन थाल्छन् ।
Previousअसफलताबाट उठेर कसरि अगाडी बढ्न सकिन्छ ? ५ टिप्स
Nextमदर टेरेसाका प्रसिद्ध भनाइहरु
असफल भएको समयमा पनि सकारात्मक सोंचलाई कसरि जोगाइराख्ने ?
चिन्तित अवस्थामा आफ्नो भावनालाई कसरि कन्ट्रोल गर्ने ?
अनावश्यक रुपमा दुखी बनाउने कुराहरु : कसरि पाउने छुटकारा ?
प्रियंका चोपडाका सफलताका सुत्र
सफल व्यवसायी जेफ बेजसका सफलताका ३ सुत्र
पढ्नै पर्नेमध्येको एक किताब : हु मुभ्ड माइ चीज December 13, 2019
डेनस वेटलीका प्रेरक भनाइहरु December 10, 2019
के तपाईं सफलताको लागि योग्य हुनुहुन्छ ? जाँच्नुहोस् आफूलाई December 8, 2019
प्रेरक प्रसङ्ग : गल्ती December 7, 2019
श्री श्री रवि शंकरका जीवनोपयोगी भनाइहरु December 6, 2019
मानिसहरुसंगको सम्बन्ध अर्थात् आफ्नो नेटवर्क कसरि बढाउने ? December 5, 2019